Samsung Galaxy S9 ga-eweta na February | Akụkọ akụrụngwa
Anyị maara nke ọma na n'oge ememme CES 2018 anyị ga-enwe akụkọ gbasara ọkọlọtọ Samsung na-esote. Companylọ ọrụ Asia emechughịkwa ihu. Enwebeghị ọnụahịa ahụ, mana ee Ekwenyela na nke ọnwa a ga-egosi Samsung Galaxy S9 ọhụrụ.
N'ime ọnwa ole na ole gara aga dị iche iche data a mara banyere ọzọ n'elu nke Samsung nso. Ihe njirimara; ụfọdụ ẹdụkde oyiyi nke ihe gị imewe ga-adị ka; ma ọ bụ nke ikpeazụ anyị maara bụ ebe onye akara aka na akara aka ga-anọ na azụ nke Samsung Galaxy S9.
Onye isi oche nke mobile mobile n'onwe ya, DJ Koh, ekwenyela na nnọkọ ogbako na Samsung Galaxy S9 ga-eweta na February ọzọ, n'ime usoro nke mbipụta ọhụrụ nke Nzukọ Ndị Na-ahụ Maka Mkpụrụ Obi. Ya mere, enwebeghị ihe ngosi na Las Vegas dị ka asịrị, mana anyị nwere ozi. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-speculated na kpọmkwem ụbọchị maka Unpacked omume Ọ ga-abụ February 27.
N'aka nke ọzọ, ekwesiri iburu n'uche na ihe atụ dị ugbu a, Samsung Galaxy S8 na Galaxy S8 + gosipụtara na New York na Machị gara aga wee ree ya otu ọnwa gachara. Ya mere, afọ a ji buru otu ọnwa tupu nke a bu ya ụzọ. Ee, Kedu ihe anyị maara ruo ugbu a gbasara Samsung Galaxy S9 a?
Nke mbụ, a ga-enwe nsụgharị abụọ (nke dị 5,8 sentimita asatọ na ụdị Plus na 6,2 sentimita asatọ). Ọzọkwa, n'ime Ọ ga - enwe Qualcomm processor kachasị ọhụrụ ma sie ike, Snapdragon 845. Banyere ncheta dị n'ime, anyị nwere ike ịhụ ụdị nwere ihe ruru 6 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa maka ụdị kachasị. N'ikpeazụ, a ga-edebe onye na-agụ mkpịsị aka n'okpuru ihe mmetụta igwefoto ka onye ọrụ wee nwee ike ịnweta ya nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung Galaxy S9 ga-eweta na February